Turkey iyo South Africa oo safiiradooda kala baxay Israel • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Turkey iyo South Africa oo safiiradooda kala baxay Israel
Turkey iyo South Africa oo safiiradooda kala baxay Israel
May 15, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku joogan London, UK.
Dalalka Koonfur Afrika iyo Turkey ayaa kala baxay Israel safiiradooda kadib xasuuqii isniintii shalay ay ciidamada Israel la beegsadeen shacabka Falastiin ee banaanbaxa ka dhigayey Marinka Gaza.
In kabadan 58 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rasaastii ay ciidamada Israel la beegsadeen dadka mudaharaadayey oo ku sugnaa xaduuda u dhaxeysa Gaza iyo dhulka israel heysato.
Mudaharaadka ay wadaan shacabka Falastiin oo soo bilowday bishii Maarso ayaa isniintii shalay sii xoogeystay xili Safaarada Maraykanka laga furayey magaalada Qudus oo kamid ah dhulka Israel sharci darada ku heysato.
Wadamada Turkiga iyo Koonfur Afrika ayaa kamid ah wadamada si adag u cambaareeyey xasuuqa shacabka Falastiin xili lagu wado in Salaasada uu golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay kulan ka yeesho dilalkii ugu danbeeyey ee Israel ka geysatay Falastiin.
Madaxweyne Tayyib Erdogan oo Israel ku tilmaamay argagaxiso ayaa ku dhawaaqay sadex maalmood oo baroordiiq ah dadkii lagu dilay Gaza,waxayna dowlada Turkey isugu yeertay dalalka Islaamka (OIC) kulan deg deg ah oo la filayo inuu dhaco maalinta Jimcaha.
Turkiga ayaa sidoo kale u yeeray Safiirkoodii fadhiyey Maraykanka, iyagoo cambaareeyey safaarada Maraykanka ka furtay magaalada la heysto ee Qudus.